Wanukubezwa esemncane olingisa kwiThe Queen
UMLINGISI weThe Queen, uLoyiso McDonald, odume ngelikaKagiso noSgaqagaqa kulo mdlalo, udalule imfihlo yeminyaka, athi imphazamise kakhulu empilweni yakhe.
Lo mlingisi uthi wanukubezwa ngokocansi wumakhelwane esemncane nokuyinto namanje esamphazamisa ocansini nomuntu athandana naye.
ULoyiso ogeqe amagula ngalokhu ohlelweni olusakazwa kuYouTube, iPodcast And Chill with Mac G, uthi ngisho enza iziqephu ezithinta ucansi kulo mdlalo, le nkinga ubuye imphazamise.
Uthe ngesikhathi esahlala kubo eThekwini, eNewlands West, kunomakhelwane owayevamise ukugila abafanyana abancane.
“Ngaleso sikhathi ngangingakazi ukuthi yini lena ayengenza yona. Ngaze ngazi ngoba sengibikela abazali bami. Ngabe sengithola ukuthi ubengahlukumezi mina ngedwa kodwa bakhona nabanye abafanyana abebagilisa lo mhlola.”
Uthe okwamenza wagcina esephumela obala ngalesi sehlakalo yingesikhathi esejoyina enye inhlangano.
“Kwakumele ngikhulume nabanye abafanyana. Ukuze bahlambuluke ngokwabehlela, kwakumele nami ngibatshele ngesigigaba engidlule kuso.”
Ukhuthaze abanye asebeke bahlukumezeka ukuba baphumele obala ngoba ukuthula kuba nomthelela ngokuhamba kwesikhathi uma sekukhona othandana naye.
“Kuyenzeka uma kukhona eningaboni ngakho ngasolinye kuvuke lokho okwake kwakwehlela. Ugcina sewukhiphela kumuntu into angahlangene nayo.”
Uthe noma elingisa iziqephu zocansi kuke kuvuke ukuthi wake wahlukumezwa.
Uthe uke washadelwa eseneminyaka engu-24 kodwa wabuye wahlukanisa nonkosikazi wakhe.
Akashongo noma ukunukubezwa esemncane kwadlala enye ingxenye yini ekudivoseni kwakhe kodwa usole ukuthi washadelwa esemncane. Uthe akanankinga nezidakamizwa kangangoba naye wake wayibhema insangu kodwa wabuye wayiyeka.
Ubuye wadalula ukuthi yena ungumhedeni ongakholelwa ukuthi kunoNkulunkulu nokuthi kunezulu nesihogo. Ebuzwa ngobudlelwano okuthiwa wake waba nabo nozakwabo, uZandile Msutwana, onguVuyiswa kwiThe Queen, uthe kwakungamampunge ayesabalaliswa ngabathize. Uthe bayazwana nje akukho okungaphezu kwalokho. Mayelana nokukhuluma isiNgisi kuphela kwiThe Queen, uLoyiso uthe akakwazi ukukhuluma izilimi zabo mdabu.